Michael Keating oo war kasoo saaray dhismaha golaha wasiirada cusub - Caasimada Online
Home Warar Michael Keating oo war kasoo saaray dhismaha golaha wasiirada cusub
Michael Keating oo war kasoo saaray dhismaha golaha wasiirada cusub
Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga Gaarka ee XGQM ee Arrimaha Somalia, Danjire Micheal Keating, ayaa ka hadlay dadaalada uu Ra’isul wasaaraha Somalia Xasan Kheyre kusoo dhisaayo Golaha Wasiirada cusub.
Micheal Keating, ayaa sheegay in Dowlada Somalia ay ka duwan tahay Dowladihii hore waxa uuna carab dhabay in Umadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku qancaan qaabka lagu soo magacaabi doono Golaha.
Micheal Keating, waxa uu sheegay in Ra’isul wasaaraha Somalia ay isla arkeen hanaanka lagu soo xulaayo Golaha Wasiirada, waxa uuna meesha ka saaray in hanaankaasi uu yahay mid cilad u keeni kara Dowlada cusub.
”Waa jid fiican hanaanka lagu soo xulaayo Golaha Wasiirada, waxaan cadeynayaa inaan ku qanacsanahay qaabka loo wado xulista Golaha”
Keating waxa uu sheegay in Madaxweynaha Somalia uu xooga saaraayo sida lagu qancin lahaa dhammaan Umadda Soomaaliyeed, waxa uuna dhankiisa ku baaqay in Shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab istaagan Dowlada Somalia.
”Waxaa dooneynaa in Shacabka Soomaaliyeed ay ka dhabeeyaan taageerida Dowlada, Dowlad waliba waxaa dhista shacabkeeda waxaan ku baaqayaa in loo midoobo garab istaaga Dowlada”
Micheal Keating, ayaa dhinaca kale Odayaasha dhaqanka ugu baaqay in si dhow ay ula shaqeeyaan Dowlada waxa uuna meesha ka saaray inay dhicikarto Odayaal ka hor imaada Dowlada taageerada badan.
Si kastaba ha ahaatee, Danjire Keating ayaa Madaxweynaha Somalia iyo Ra’isul wasaaraha ku amaanay dhexgalka Bulshada Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan.